Disclosure | Apache Cement | Shwe Taung Cement Co., Ltd
Shwe Taung Cement Company Limited expanded into the cement business in 2010 to meet the rapidly growing demand of cement in Myanmar. STC is an integrated cement manufacturer with current clinker manufacturing capacity of 1,500 tons per day and cement grinding capacity of 2,800 tons per day. The Company distributes its cement all over Myanmar under the brand name “Apache Portland Cement (“Apache”)”. STC is currently in discussions with Wuhan Building Material Industry Design & Research Institute Co., Ltd.,asubsidiary of China National Building Material Co., Ltd. (CNBM),aChinese construction company with extensive experience in cement, for expansion of the new plant on an engineering, procurement, construction (EPC) basis. Initial limited construction works have commenced and the EPC contractor is expected on site in the latter half of 2017; construction of the plant will take approximately2years. The Project envisages brownfield expansion of STC’s cement plant at Pyi Nyaung Village, Thazi Township, Mandalay through expansion of clinker capacity to 5,500 tpd and cement grinding capacity to 7,200 tpd. The Project also involves construction ofaWaste Heat Recovery System (‘WHRS’) and improvement in emission control systems. The project involvesa$15 million equity investment anda$20 million loan to STC from IFC to support expansion of an existing cement plant located within the Mandalay Region of Myanmar. IFC will also provide support to mobilize additional debt and equity for the company. IFC’s proposed investment will contribute to private sector development and support increase in economic activity in Myanmar, an IDA and FCS country. It will sendapositive signal to other investors considering investments in the country and attract future capital flow into the sector as well. IFC’s involvement with STC will also help showcase Environmental and Social best practices, resource efficiency and cleaner production norms alongside serving asacatalyst for other firms to raise their standards in such areas. Please check below Summary of Investment Information (SII) and Environmental & Social Review Summary (ESRS) for more details.
Project Description E & S Project Categorization and Applicable Standard Environmental and Social Mitigation Measures Stakeholder Engagement Broad Community Support ....
Project Description Sponsor / Cost / Location Development Result E&S Category Rationale / Risks and Mitigation Contacts Shwe Taung Cement ....
ရွှေတောင်ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက် (STC) အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘိလပ်မြေလိုအပ်မှုအား တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန်အတွက် ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် တစ်နေ့လျှင် မီးသင့်ကျောက်အနေဖြင့် တန်ချိန် (၁၅၀ဝ)၊ ဘိလပ်မြေအနေဖြင့် တန်ချိန် (၂၈၀ဝ)အထိ ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး အပါချီ ("Apache") ဟူသော တံဆိပ်ဖြင့် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ ရွှေတောင်ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီ လီမိတက် (STC) သည် လက်ရှိအချိန်တွင် အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာ၊ ဝယ်ယူစုဆောင်းမှု၊ တည်ဆောက်ရေး (EPC) အခြေခံဖြင့် စက်ရုံအသစ်ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် China National Building Material Co., Ltd (CNBM) ၏လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သော ဘိလပ်မြေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အတွေ့အကြုံရှိသော တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Wuhan Building Material Industry Design & Research Institute Co., Ltd နှင့်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ကနဦးဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤစက်ရုံစီမံကိန်းအား မန္တလေးတိုင်း၊ သာစည်မြို့နယ်၊ ပြည်ညောင်ကျေးရွာတွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက တစ်နေ့လျှင် မီးသင့်ကျောက်အနေဖြင့် တန်ချိန် (၅၅၀ဝ) ဘိလပ်မြေအနေဖြင့် တန်ချိန် (၇၂၀ဝ) ကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းစက်ရုံစီမံကိန်းအသစ်တွင် စွန့်ပစ်အပူပြန်လည်ရယူမှုစနစ်နှင့် လေထုအတွင်းထုတ်လွှတ်မှု ထိန်းချုပ်စနစ်များအား ထည့်သွင်းတည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
စီမံကိန်းသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း (IFC) မှ ရွှေတောင်ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက် (STC)သို့ ဒေါ်လာ (၁၅)သန်း တန်ကြေးရှိသော အစုရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ဒေါ်လာသန်း (၂၀) ချေးငွေတို့ပါရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တည်ရှိသည့် ရှိရင်းစွဲဘိလပ်မြေစက်ရုံတိုးချဲ့ခြင်းကို ထောက်ပံ့ပေးရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း (IFC) သည် ရွှေတောင်ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက် (STC) အတွက် ထပ်ဆောင်းအကြွေးနှင့် အစုရှယ်ယာ ရွှေ့ပြောင်းလည်ပတ်မှုများကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း (IFC) မှကမ်းလှမ်း ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာစေရန်လည်း များစွာအကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးအဖွဲ့အစည်း (IFC) အနေဖြင့် ရွှေတောင်ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီလီမိတက် (STC) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျင့်ကောင်းများ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်သောနည်းလမ်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သန့်ရှင်းသောထုတ်လုပ်မှုစနစ်များအား လမ်းညွှန်ပြသ ပေးနိုင်မည့်အပြင် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများ မြင့်တက်လာစေရန်လည်း ကူညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ဤစီမံကိန်းအား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါ အစီရင်ခံစာများတွင် ဖတ်ရူနိုင်ပါသည်။
STC Biodiversity Action Plan
ESRS (Myanmar Version)
ESAP( Myanmar Version)
Shwe Taung Cement Plant – IEE Report for Waste Heat Recovery Project in Mandalay Region, Myanmar (August – 2019)
Shwe Taung Cement - Stakeholder Engagement Plan